Moments Neshamwari 48
Zvakakosha here kuti murume abve mumuviri wake wenyama asingazivi, kuti mweya unogona kupinda muhuro hwahwo?
Zvirinani kuti murume wemutoro azive zvese zvaanoita munyama neese mamwe mamiriro ekuvapo. Kana murume — murume achireva musimboti wokuziva mumuviri — akasarudza kusiya muviri wake, anousiya asingazive; kana akasiya muviri wake asingazivi, haana chaanogona kusarudza panhau yacho.
Izvo hazvidikanwe kune mweya - uchitora kuti "murume" uye "mweya" uri mubvunzo wakagadzirirwa kuve wakafanana-kuti ubve kubva mumuviri wayo wemuviri kuti upinde mune yavo yekurota. Munhu haawanzo, kana achinge adaro, anosiya muviri wake wenyama asati afa.
Munhu anoziva kusimuka kwake; anoziva mumamiriro ekurota; haazivi panguva yekumuka kubva kune yekurota mamiriro; ndiko kuti, pakati pekupedzisira nguva yaanenge akamuka uye kutanga kwekurota. Kupfuura kubva panyama kuenda kuroti mamiriro kunoenderana nemaitiro erufu; uye kunyangwe nekufunga uye kuita murume achitsanangura kuti kuchinjika kuchinjwe uye sei, haazivi kana kuziva nguva kana nguva yasvika, kunyangwe angave aine zvimwe zvekufunga kuti zvinopfuura sei.
Kana munhu akadzidza kupinda uye nekusiya nguva yekurota achida, anorega kuzova munhuwo zvake, uye chimwe chinhu chinopfuura munhuwo zvake.
Mweya inosvika kusvika zvakadini iyo inosiya miviri yavo yenyama nokuziva uye inoramba ichiziva pashure porufu?
Izvo zvinoenderana nekuti ndedzipi dzaive pfungwa uye zviito zveizvo munhu anobvunza senge mweya, uye pane zvepfungwa uye zvekunamata zvinowanikwa mune humwe hupenyu hwenyama uye kunyanya mune yekupedzisira. Kana murume achisiya muviri wake zvawo nehana parufu, anoda kana kurambidza rufu. Iva izvo kuti mumwe munhu akafamba nenzira yekufa nehana nechero kana zvisingaite, iyo mamiriro ekuziva, ayo achapinda, anoenderana uye akatsunga nezvaakawana ruzivo rwehupenyu munguva yehupenyu mumuviri wake wepanyika. Kwete kutora uye kuve nehuwandu hwemari uye zvinhu zvepasirese, zvisinei yakakura, kana chinzvimbo chemagariro, kana kujairana neinowona tsika uye yekokorodzano, kana erudition uye kujairana nezvakafungwa nevamwe varume; hapana chimwe cheizvi. Kuwanikwa mushure mekufa kunoenderana nehungwaru hwehungwaru hwakasvikirwa nemurume munguva yehupenyu; pane izvo zvaanoziva hupenyu kuve; mukutonga kwezvaanoda; pane kudzidziswa kwepfungwa dzake nemhedzisiro yaakazvishandisa, uye nemafungiro ake kune vamwe.
Mumwe nemumwe murume anogona kuumba muhupenyu mamwe mafungiro eparufu mushure mekufa nekuziva izvo "zvaanoziva" uye zvaanoita muhupenyu huno pamwe chete naye, uye ndeapi maitiro ake kune kunze kwenyika. Kwete izvo zvinotaurwa nemurume kana iye chaanotenda nezvake mushure mekufa kwenyika anozomuona kana afa. Zvematongerwo enyika zvechitendero zvakagadzirwa kuita zvinyorwa zvechibvumirano uye kudavirwa nevafundisi vezvechitendero vane tariro kana nekutsamwira nyika hazvizoite kuti vanhu vazvizive uye vobva vafa pane zvavainge vanzwa nezvazvo kare, kunyangwe kana vakatenda zvavakanzwa. . Nyika yemberi yekufa haina kuwanikwa iri nzvimbo inopisa yakagadzirirwa avo vasingatendi, kana kungotenda uye nhengo dzechechi zvinopa nzvimbo yekusarudzika kudenga. Kutenda mushure mekufa kwenyika kunogona kuita izvo nyika chete kusvika parinotapura mamiriro ake epfungwa nemaitiro ake. Hakuna mwari kudenga kudenga kusimudza munhu kubva pasi nepachipfuva chake; hapana dhiabhori kubata munhu pane pitchfork yake kana apfuura nyika, zvisinei nezvaakatenda zvave mukati mehupenyu, kana izvo zvaakavimbisa kana kutyisidzirwa pamwe nevechitendero. Kutya uye tariro pamberi porufu hazvizoshanduri chokwadi chekuti mushure mekufa kwenyika. Chokwadi chinotangira nekutsanangura kwemunhu mushure mekufa kwenyika ndeche: chaaiziva uye chaaive asati afa.
Munhu anogona kunyengedza vanhu nezvake iye achiri munyika; nekudzidzira anogona kudzidza kuzvinyengedza pamusoro pake paupenyu hwepanyama; asi haakwanise kunyengedza iye Wega hweMusoro Wehungwaru, iye Iye, sekudanwa kwaanodaidzwa, nezvezvaakafunga nekuita; nekuti zvese zvaakange afunga nekuzvisarudzira zviri zvizere uye mune zvese zvakazara zvakanyoreswa mupfungwa dzake; uye zvinoenderana nemutemo wekusarongeka uye wepasirese wezvemitemo, kubva kwaari uko kusingakwikwidze uye pasina pukunyuka, iye ndiye zvaakafunga nekuzvisarudzira.
Rufu inzira yekuparadzanisa, kubva panguva yekusiya muviri wenyama kusvika pakuziva mudenga mamiriro. Rufu runobvisa zvese kubva kumunhu zvisiri zvedenga repasi. Hakuna nzvimbo kudenga kune mubhadharo wake-varanda nemabhangi ake. Kana munhu achinge ave neshungu pasina ivo haangave kudenga. Asi iye chete ndiye anogona kuenda kudenga ndewe wedenga nzvimbo, uye iyo isiri pasi pegehena. Varanda vehomwe nenyika nemabhangi zvinoramba zviri munyika. Kana murume aifunga kuti ndewake iye achiri mupenyu pasi pano, aive akanganisa. Haakwanise kuve yake. Anogona kuve nechinhu pazvinhu, asi anazvo chete izvo zvaasingakwanise kurasikirwa. Izvo zvisingagone kuraswa nemurume anoenda naye kudenga, anoramba ari wake pasi, uye nekusingaperi iye achizviziva. Anogona kuifukidza uye iifukidze pasi neezvinhu zvisiri zvake, asi achiri kuzviziva. Iyo pfungwa yepfungwa iyo murume inopinda uye anoziva mukati mehupenyu iye achapinda uye azive mushure mekufa, nepo mukati mehupenyu hwepanyama anovhiringidzwa nematambudziko uye nehanya kwenyika. Mu "matunhu akakwirira", kana kudenga, izvo zvaanoziva zvakasununguka pakutya nekutsamwa. Chero chinotadzisa mufaro munyika chinobviswa pachinhu icho.